Ezasolwandle - AOOD Technology Limited
Isicelo sasolwandle sinezidingo ezeqile zamasongo okushelela ngenxa yemvelo yaso yasolwandle enzima. Okuhlangenwe nakho okubanzi okubanzi kwe-AOOD kumaphrojekthi asolwandle kanye namasu amasha aqhubekayo aqinisekisa ukuthi amasongo e-AOOD angahlangabezana nezidingo ezandayo zokudlulisa. Amasongo e-AOOD enza umsebenzi wawo ezimotweni ezingaphansi kwamanzi, amasistimu ama-satellite satellite antenna, ama-winches asolwandle, amadivayisi we-sonar, imishini yokuhlola ukuzamazama komhlaba nolwandle.
Izimoto eziqhutshwa kude (ama-ROV) nezinhlelo zokuxhumana ngesathelayithi njengabasebenzisi ababili ababalulekile bokusebenzisa amasongo okusetshenziswa kwezasolwandle bahlala beyinsimu ekhulayo ye-AOOD. Ukusetshenziswa okukhulayo kwamarobhothi angaphansi kwamanzi embonini kawoyela nogesi wamanzi ajulile kukhuthaza ukwakhiwa kwezinhlelo ze-ROV slip ring. Amasongo okushelela asetshenziswe emanzini ajulile kumele amelane nezimo ezingaphansi kwamanzi ngaphansi kwengcindezi nokwethuka nokugqwala. I-AOOD inikeze izinkulungwane zamaringi okushelela ama-ROV kufaka phakathi isiteshi esisodwa noma iziteshi eziphindwe kabili ze-electro-optic slip izindandatho ze-Ethernet noma amasiginali we-fiber optic namasongo okusalungiswa kagesi. La masongo ashelelayo wonke aklanywe ngenxephezelo yengcindezi, evalwe nge-IP66 noma i-IP68, izindlu eziqinile zensimbi engagqwali yokulwa nokugqwala nemvelo engaphansi kwamanzi.
Uhlelo lokuxhumana lwe-satellite antenna lungakhomba ngokuzenzakalela, lithole, futhi lulandelele amasiginali wesathelayithi, kubalulekile ekuxhumaneni kwasolwandle kusuka kwelitshe kuya endaweni yokuqapha eyihlane. Iqukethe izinto ezintathu ezibalulekile — ikhebula le-RF, isixhumi se-RF ne-antenna.
I-Antenna iyinto yokuqala yohlelo lokufaka ohlelweni lokuthola isignali engenantambo, ngoba uhlelo lwe-antenna lwenza ukuxhumana ngezindlela ezimbili phakathi komhlaba nesinye isiteshi esihamba ngokushesha, lapho-ke abantu bangalandelela i-radar, indiza, ukuziqhayisa nokuhambisa izimoto ezivela esiteshini sokuqapha. Njengoba uhlelo lwe-antenna kufanele luqhutshwe ngokuzungeza okungu-360 ° okuvundlile noma okuqonde mpo, ngakho-ke kudinga indandatho eshelelayo ukufaka ohlelweni lwe-antenna ukuxazulula amandla we-voltage nokulawula amasiginali kusuka engxenyeni eyodwa emile kuye engxenyeni ye-rotor. Kunganikezwa amalunga we-AOOD coaxial rotary kanye ne-hybrid coaxial rotary ngokuhlanganyela kanye nesilayidi kagesi.
Imikhiqizo letihlobene: Izindandatho Zasolwandle